Iray Tapitrisa Yuan Ny Findramana Sipa Hiarahana Amin’ny Taombaovao Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2014 22:16 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Italiano, Español, русский, English
Nalaza haingana dia haingana ny filazana an-tserasera fitadiavan'ny lehilahy Shinoa iray sipa hiaraka aminy any ambanivohitra mba hialana amin'ny fankalazana manirery ny Taombaovao Shinoa amin'ny vidiny iray tapitrisa yuan (165.200 dolara US).
Araka ny Dahe Daily [zh] dia mivaky toy izao ny hafatra an-tseraseran'ilay lehilahy:
Sahirana loatra amin'ny asako aho, manery ahy hanambady i neny, izany no ikasako tsy misorona hanofa sipa ho entina any an-trano. Handoa amin'ny vidiny iray tapitrisa yuan sy hanofa voromby manokana avy eto Shenzhen ho any Zhenzhou. Fepetra: tanora vavy tsara jerena latsaky ny 25 taona, mihoatra ny 1,68 metatra sy tsy mihoatra ny 50 kilao ny lanjany. Manana ny mari-pahaizana baka farafahakeliny. Misy folo isan-jatony mihoatra raha toa ka virijiny ianao na manana mari-pahaizana PhD. 200.000 yuan no omena amin'ny andro voalohany, ary aloa ny ambiny rehefa vita ny afera.
Nanapaingotra sarin-dehilahy mipetraka manoloana antontam-bola ilay lehilahy mitady sipa hofaina. Sary avy amin'ny Weibo
Nahazo fisoratana anarana mihoatra ny 5.000 sy fanehoan-kevitra mihoatra ny 10.000 ny filazana tamin'ny andro voalohany. Maro ny Mpiserasera no tsy talanjona amin'izany: ny sasany mieritreritra fa dokambarotra natao fotsiny io, raha misalasala amin'ny tena fikasana ao anatiny ao kosa ny hafa ary manontany tena hoe nahoana no tsy maintsy mitady sipa hofaina tahaka izao ity tovolahy mpanankarena ity.
Na izany aza, misy vitsivitsy malahelo satria tsy tafiditra ao anatin'ny vehivavy azo fidiana.
Nifandray tamin'ilay lehilahy ny mpanangom-baovao ka novaliany fa tena izy io lahatsorany io saingy tsy mety milaza ny mombamomba azy izy.
Na dia mbola mampisalasala aza ny fikasan'ilay lehilahy,dia tsy zava-baovao any Shina noho ny faneren'ny fianakaviana ny manofa na mindrana sipa ho entina mody mandritra ny Taombaovao Shinoa. Ao amin'ny tranonkalam-piantsenana malaza indrindra ao Shina antsoina hoe Taobao, misy ny tanora no mametraka dokambarotra mitady sipa hofaina, ary misy ny hafa izay manolotra servisy ho sipa vonjimaika.
Raha misy ireo tanora sasantsasany manofa sipa ho famalifaliana ny fanirian'ny ray aman-dreny, ny hafa kosa miezaka ny mandositra. Vao tamin'ny fiandohan'ny herinandro lasa teo izao no nisy reny shinoa nividy pejy iray manontolo hanaovana dokambarotra ao amin'ny Chinese Melbourne Daily miangavy ny zanany lahy hody amin'ny Taombaovao. Nampatahotra ilay zanany sy nampitsoaka azy manko ny fikasan'ny reniny hanery ny zanany hatao mariazy.